Kani waa qorshe Somalia iyo Djabuuti ku Sandulaynaya Aqoonsiga S/land ama ka dhigi kara S/land Ra'isal-wasaraha Ethiopia !! Dr.khadar- Libaaxley.
Wednesday May 16, 2018 - 08:54:19 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dani mar-walba waa u seeto ciddii dareen iyo damiir buuxa u leh; dantaasi oo u kala baxda mid ( qofeed, qoys , qabiil iyo qaran ) intaba , heerka baaxada muga leh waxa uu yahay la haanshaha kartida la isku waafajin karo intaba. Curiyayaasha dabka ritay ee geeska afrika ka aloosan sabankan ee baan-
dhaynta marka ay timaado cuf iyo culeyskooda leh waxa ay yihiin:
2. Markaad eegto: Guud ahaan siyaasadaha dhan-walba isku murugsan ee
3. Markaad eegto: Hishiiskii 3 geesoodka u ahaa somaliland !! assaraarkii Somalia,
daba-furkii Djabuuti iyo sudan.
Dunida,Dawladaha iyo Danaha dawlad kasta rabto in ay u hirgalaan; ma jirto dan dal dadkiisu leeyahay oo uga tanaasula ama si cad ugu ill-duufa dano
kale oo dal iyo dad kale leeyihiin!! Haday timaadna waa doqoniimo iyo wax aan biyana kaa maydhaynin.
Iyada oo sidaa xaalku yahay; hishiiskii 3 geesoodka u ahaa s/land waatii la wada ogaa wixii ka dhashay arinkaa ee geeska baroorta iyo qayladu is-xidhay illaa qaramada-midoobay; isla booqashadii u horaysay ee ra’isal-wasaaraha cusub ee itoobiya Abby axmed cali ku tagay jabuuti iyo suudaan intuba ku
tallaabsadeen go’aamo xuladyo isku eeg oo ku aroora bixinta saamiyo waafi ah %51 dhanka jabuuti iyo %41 dhan suudaan oo ay itoobiya yeelato;
sidaasna dan iyo door ba ay miciin bidaan iyadoo xaalku u eegyahay in ay tallo bideen u sibir-siibka saamigii Djabuuti iyo Suudaan ka horeeyey ee Somaliland siisay dawlada itoobiya %19 iyo si ka dhan ah in Somaliland biqilka lagu gooyo .
3. Horaa loo yidhi : rag ciil kii cadaab ka dooray !! Hirgalinta go’aan kaas haday Somalia iyo Djabuuti ku digagaxan waayaan oo ay ku godlan waayaan, wax haboon in Somaliland si ku meel gaadh ah u noqoto ( Ethiopia ) go’aan kaasi ayaa hubaal ah in uu badhida dhulka ugu
dhufanayo xamar iyo Djabuuti iyo waliba masar inta ay ugu yartahay; qadashada go’aankan horteedna laga tallo galiyo inta ay khusayso; si ay u bixiyaan aqoonsi buuxda; hadii kale si ay ku biiri doonaan dal-
weynaha itoobiya oo ay kilin gaar ah noqon doonaan, isla markaana isla markaana ay noqon doonaan ra’isal wasaaraha itoobiya oo u baahan mareeg siyaasadeed iyo shaqo badan!! Djabuuti iyo Somalia iyo qaar badan oo kalana dana hoodu aad u saqiiri doonaan!! Dhanka kale Waa hubaal in mararka qaar ragganimadu meel cidhiiya ku jirto; oo wey kugu kalifaysaa wax aanad doonteen hadaad waxa aad doonayso samaan ku heli la hayd.
Gunaanad : Carabtu waa dawlado fara badan oo midow iyo jimciyad leh, si markaad u eegto dhamaantood waa wada carab; hab fikirka, dhaqanka
guud, iyo diinta intaba waynu kala simanahay, hadii la yidhaahdo carab oo dhami hal-dawlad ah ha noqoto suurta-gal maaha; hadaba si la mid
ah waxa sax iyo qurux ah in soomaali noqoto 5 dawladood oo kala madax banaan oo wallaalo isgarabsado ah oo jimciyad guud leh; laf jab
iyo uur ku taalo ayey Somaliland iyo shacabkeeda ku tahay 27 sano oo aqoonsi la’aan iyo go’doon dunida kaga jirto iyadoo tolkeed oo aqoonsan
karaa hareeraha ka xigaan!! taasi waxa ay ku imanaysaa tahayna sida sharafku ku jiro Somaliland oo Somalia iyo Djabuuti labaduba si buuxda hadh cad u aqoonsadaan si ay dunida inteeda kalana u aqoonsadaan insha’allah.